किन चित्त दुखाए शेर्पाले ? – श्वेतपत्र
आर्थिक सर्भेक्षण : आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशत, विप्रेषण आप्रवाह खुम्चियो
१७ खर्बको बजेट ल्याउन अर्थसमितिको सुझाव [पूर्ण पाठ)
संसदमा प्रधानमन्त्री भारतप्रति आक्रमक ! भने, ‘हाम्रो भूमि फिर्ता गर’
एकपछि अर्को हिट फिल्म दिइरहेकै बेलामा अस्ताए इरफान खान (संघर्षको कथा)
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत, अरूलाई काम दिन्छौं ! [पूर्णपाठ]
अर्थतन्त्र बचाउन विनोद चौधरीका शुत्रहरु
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई गगन थापाको पत्र
आगामी बजेट रोजगारी सिर्जना गर्न खर्च गर्नुपर्छ
लकडाउनमा टोलबासीको सक्रियतामा लिन सकिने फाइदाहरु
डाक्टरले मस्तिष्कको शल्यक्रिया गर्दा बिरामी आफैले बजाए मादल
अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रधानमन्त्रीको ठोकुवा (भिडियो हेर्नुस्)
एउटा खेलाडीले राम्रो खेल्न नसके खेलमात्र हार्छ । तर एउटा आरोहीले जीवन नै गुमाउनु पर्छ ।
नेपालको पर्यटन हिमालबाट सुरु भयो । र, अहिलेसम्म हिमालमै अडिएको छ । सन् १९५० मा फ्रेञ्च नागरिक मरिस हर्जोग र लुइस लाकनलले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरे । सन् १९५३ मा एडमन्ड हिलारी र तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुगे । अनिमात्र नेपालमा पर्यटनको सुरुवात भयो ।
विश्वमा नेपाललाई चिनाउने हिमाल र शेर्पाहरु नै हुन् । नेपाल हिमालयको देश भनेर चिनिन्छ । वर्षेनी हिमाल चढ्न आउने सयौं विदेशी आरोहीलाई शेर्पाहरुले सकुशल हिमालको चुचुरोमा पुर्याउँछन् । सगरमाथा चढेर फर्किने विदेशी आरोहीले आफ्नो देशमा राष्ट्रिय सम्मान पाउँछन् । तर, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर विदेशीलाई हिमाल चढाउने शेर्पा आरोहीको नेपालमा कुनै इज्यत गरिँदैन । विश्वलाई नै चकित बनाउने वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर शेर्पाले समेत राज्यबाट सम्मान र इज्यत पाउँदैनन् ।
आङछिरिङ शेर्पा, निवर्तमान अध्यक्ष – नेपाल माउन्टेनियरिङ एशोसियसन
कामिरिता शेर्पाले २४ पटक सगरमाथा चढेर विश्वलाई चकित बनाउनु भयो । उहाँ स्वदेशी विदेशी मिडियामा राम्रो कभरेज हुनुभयो । विश्वका चर्चित मिडियाहरुले उहाँको किर्तिमानलाई प्राथमिकता दिए । खासमा उहाँले नेपालको गरिमा उँचो बनाउने काम गर्नुभयो ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कामिरिता एभरेष्टबाट फर्किदा हामी उहाँलाइ एयरपोर्टमा लिन जाँदा सरकारको तर्फबाट कोही पनि उपस्थित थिएनन् । सबैभन्दा धेरै पटक हिमाल चढ्ने उहाँ त संसारकै हिरो हो नी ।
कामिरिताले सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टी पोख्दै आउनु भएको छ । शेर्पा आरोहीलाई विश्वले सम्मान गर्छ । तर आफ्नै सरकारले वास्तै गर्दैन । आज कति वल्र्ड रेकर्ड होल्डर शेर्पाहरु आफ्नै देशमा गुमनाम भएर बस्नु परेको छ ।
धेरै शेर्पा आरोही रिटायर्ड भएपछि विदेश गइसक्नुभयो । विदेशमा नेपाली शेर्पा आरोहीलाई राम्रो सम्मान पाउँछन् ।विदेशमा पनि शेर्पाहरुले आरोहणको लिडिङ भुमिका निभाइरहेका छन् । मोटिभेसनल स्पिकर बनेका छन् ।
यो पेशामा ४४ वर्षदेखि आवद्ध छु । हामीले सरकारसँग शेर्पा अन्यायमा परेको कुरा राख्दै आयौं । तर कहिल्यै पनि चासो राखिएन । आरोहण पेशा यति कठिन छ कि हरेक पटक मृत्यूलाई जितेर फर्किनु पर्छ । एउटा खेलाडीले राम्रो प्रर्दशन गर्न नसके खेलमात्र हार्छ । तर एउटा आरोहीले जीवन नै गुमाउनु पर्छ ।तर यहाँ एउटा खेलाडी र आरोहीलाई गर्ने व्यवहारमा कति फरक छ ?
खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रय र राष्ट्रिय खेल खेलेर फर्किदा विमानस्थलमै भव्य सम्मान हुन्छ । बाजागाजासहित खेलाडीलाई शहर घुमाइन्छ । एयरपोर्टमै मन्त्री सम्मान गर्न पुग्छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले बोलाएर सम्मान गर्छन्, रात्रिभोज दिन्छन् । खेलाडीलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिने घोषणा गर्न तछाडमछाड गर्छन् । देशको इज्यत राखेको भन्दै खुब प्रशंसा गर्छन् ।
आज सिंगो मुलुकलाई विदेशमा चिनाउने शेर्पाहरुले मृत्यूसँग लडेर हिमाल आरोहण गरि फर्किदा कुनै सम्मान छैन । सेवा सुविधा त धेरै टाढाको कुरो भइहाल्यो । मन्त्रीको कुरै छाडौं, कर्मचारी पनि एयरपोर्टमा स्वागत गर्न पुग्दैनन् । शेर्पाहरु हिमालका खेलाडी हुन् । हिमालसँग लडेर देशको इज्यत उँचो बनाउँछन् । ज्यान जोखिममा पारेर विदेशीलाई चुचुरोमा पुर्याउँछन् । मुलुकको पर्यटन जिवित राखेका छन् ।
जतिबेला शेर्पाहरु स्कुल र कलेज जानुपर्थ्यो, त्यो बेला उहाँहरु विदेशीलाई हिमालको चुचुरोमा पुर्याउन व्यस्त भए । त्यसैले पढ्न लेख्न पाएनन् । लेखापढीनहुँदा पछाडी परे । एउटा आरोही ४५/४६ वर्षपछि रिटायर्ड हुन्छ । विदेशीहरु पनि युवा आरोही खोज्छन् । ४० वर्षमुनिको गाइड छैन ? भनेर सोध्छन् ।
चुचुरोमा पुगेपछि सामुहिक फोटो खिचाउँदै आरोहीहरू
आरोहीरिटायर्ड भएपछि पेन्सनको व्यवस्था छैन । शिक्षा नभएपछि सामाजिक रुपमा पनि ब्याकवार्ड नै भयो ।जागिर पनि पाउँदैनन् । उर्जाशिल उमेर हिमालमै वितिसकेको हुन्छ । रिटायर्ड भएपछि कसरी जीवन यापन गर्ने? बिजोग अवस्था हुन्छ । त्यसैले त धेरै आरोही विदेश छिरेका छन् ।
म नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को तीन कार्यकाल अध्यक्ष बनेँ । मेरो कार्यकालमा ९ वटा पर्यटनमन्त्री फेरिनुभयो । आरोहीको विषयमा ९ वटा नै निवेदन बुझायौं ।मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइरहने, हामी निवेदन दिइरहने भयो । कार्यान्वयन हुन सकेन ।
सन् २०१४ मा सगरमाथा हिमपहिरो गायो । १३ जनाको तत्कालै निधन भयो । लास पनि भेटियो । तर ३ जनाको लास अझै पनि भेटिएको छैन । १६ जना आरोहीको ज्यान गुमेपछि शेर्पाहरुले आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि आन्दोलित हुनुपर्यो ।
त्यो भन्दा अगाडि आरोहीको इन्स्योरेन्स १० लाखमात्र थियो । विरामी परेमा मेडिकल बिल १ लाख हाराहारी कभर हुन्थ्यो । हेलिकोप्टर रेस्क्यूको व्यवस्था थिएन । हामीले आरोहीको इन्स्योरेन्स १० लाखबाट २५ लाख बनाउन भन्यौं । मेडिकल बिल कभरेज ८ लाख, रेस्क्यू कभरेज बिल १० लाख बनाउन भन्यौं । नेपालमा बिमा कभरेज अधिकतम १५ लाख रहेछ । १५ लाखमा चित्त बुझायौं । मेडिकल बिल ४ लाख पुर्यायौं । रेस्क्यू बिल १० लाख कभरेज हुने भयो ।
विश्वका आरोहीलाई शेर्पाले हिमालको टुप्पोमा पुर्याउँछन् । उनीहरु आफ्नो देशमा प्रख्यात आरोही बन्छन् । यो शेर्पाकै देन हो । मैले विदेशी प्रख्यात ६/७ जना आरोही साथीहरुलाई भनेँ,शेर्पाका छोराछोरीको शिक्षादिक्षा, औषधोपचार, आरोहीको सुरक्षाका लागि कोष खडा गर्न लागेका छौं, तपाइँहरुबाट सहयोगको अपेक्षा छ । मैले अपिल गर्नेवित्तिकै ९ जनाबाट तीन करोड जम्मा भयो । त्यो फण्डबाट शेर्पाका छोराछोरीको शिक्षा र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका आरोहीलाई सहयोग भइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले यति गर्दा पनि सरकारले केही गरेन । हिमालबाट मोटो रकम रोयल्टी उठ्छ । आरोही रिटायर्ड भएपछि पेन्सन वा अन्य आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दियौं । सरकारलाई हिमालबाट उठेको रोयल्टीबाट कम्तीमा १० प्रतिशत आरोहीको वेलफेयर अलायन्समा राखिदिन लिखित सुझाव दिइरह्यौं ।
पर्यटन मन्त्रालयले ५ प्रतिशत छुट्याउने सहमति गर्यो । त्यो बेला पर्यटनमन्त्री सरदसिंह भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । त्यो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट पारित हुनुपथ्र्यो । मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पुग्यो वा पुगेन थाहा हुन सकेन । मन्त्री र सचिव सकरात्मक हुनुहुन्थ्यो । दुर्भाग्य, सरकार परिवर्तन भइहाल्यो । अस्थिर सरकार हुनाले कार्यान्वयन हुन सकेन ।
मेरो परिवार ४ पुस्तादेखि आरोहणमा छ । बुवा तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाको साथी हुनुहुन्थ्यो । गाउँको मुखिया पनि । आरोहण पेशा एकदमै कठिन हुनाले बुवाले मलाई डाक्टर वा इञ्जिनियर पढाउने भन्नुभयो । अनि डाक्टर पढ्न गएको हुँ । १९७० तिरको कुरा हो, पढ्दा पढ्दै अष्ट्रिया गएको थिएँ । इमिग्रेसनका हाकिमले पासपोर्टमा शेर्पा देख्ने वित्तिकै दायाँ बायाँ नहेरी ड्याङ छाप हन्दियो । र, बाहिर आएर म सँग फोटो खिच्यो ।
२४ पटक सगरमाथा आरोहण गरेर वर्ल्ड रेकर्ड राखेका कामिरिता शेर्पा चुचुरोमा ।
तपाइँहरु हिमाल चढ्ने मान्छे भन्दै फोटो खिच्यो । अहिले पनि शेर्पालाई विदेशमा खुब सम्मान गर्छन् । हाम्रो पेशा नै आरोहीलाई सुरक्षित रुपमा हिमाल आरोहण गराएर खुशी तुल्याउने हो ।
प्रथम सगरमाथा आरोही तेञ्जिङ विदेश जानुभयो । कामिरिता भन्दा अगाडि सबैभन्दा बढी सगरमाथा चढ्ने रेकर्ड आप्पा शेर्पाको थियो । २१ पटक सगरमाथा चढेका आप्पा अमेरिका हुनुहुन्छ । आप्पालाई पनि सरकारले कुनै भ्यालु दिएन ।
नेपालमा थुप्रै वल्र्ड रेकर्ड होल्डर छन् । उनीहरुलाई स्वदेशमै राम्रो सम्मान र सेवा सुविधा भइदिएको भए विदेश जाँदैनथे ।
आज जति पनि प्रख्यात आरोही छन् उनीहरु विदेशमै छन् । ९ चोटी सगरमाथा चढेकी वल्र्ड रेकर्डधारी महिला आरोही लाक्पा शेर्पा पनि अमेरिकामै हुनुहुन्छ । मिडियाबाट पहिला सगरमाथा चढ्ने आङ छिरिङ शेर्पापनि विदेशिनुभयो । १९/२० चोटी सगरमाथा चढ्ने कामिरिताको भाई लाक्पारिता पनि बाहिर हुनुहुन्छ । छोटो समयमा सगरमाथा चढ्ने स्पिड काजी अमेरिकामै बस्नुहुन्छ । अरु थुप्रै महिला पुरुष आरोही अमेरिका जानुभएको छ । अन्य मुलुकमा पनि नेपाली आरोही हुनुहुन्छ ।
सगरमाथामा वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने अनि अमेरिका छिर्ने ।
रिटायर्ड भएपछि जीवन धान्नका लागि शेर्पाहरु विदेशिन बाध्य भएका हुन् । स्वदेशमा कुनै भ्यालु छैन्, इज्यत छैन । तर विदेशमा ठूलो सम्मान र इज्यत मिल्छ ।
अमेरिकामा आप्पाले ठूल्ठूला कर्पोरेट कम्पनी र संघसंस्थाका मोटिभेसनल कार्यक्रममा लेक्चर दिनुहुन्छ ।
विदेशमा नेपाली आरोहीले राम्रो काम पाइरहेका हुन्छन् । त्यहाँको सरकारले सम्मान गरेर राखेको छ । विदेशमा खाने, बस्ने, छोराछोरी पढाइदिने गर्छन् ।उहाँहरु स्टान्डर्ड जीवन विताइरहनु भएको छ ।
विदेशिएका कतिपय नेपाली आरोही युवा छन् । उनीहरुले त्यहाँका हिमाल चढ्न लिड गरिरहेका छन् ।
विकसित मुलुकका मान्छे किन लाइन लागेर नेपालमा हिमाल आरोहण गर्न आउँछन् ? उनीहरुले सर्वोच्चशिखर सगरमाथा वा ८ हजार माथिका हिमाल आरोहण गरेर आफ्नो मुलुक फर्किदा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको सम्मान पाउँछन् । ठूल्ठूला सेमिनार र कार्यक्रममा लेक्चर दिन बोलाउछन् ।
आरोही अमेरिकामा बढी
नेपाली आरोही सबैभन्दा बढी अमेरिका पुगेका छन् । जापान र युरोपतिर पनि छन् । हिमालय भएका मुलुकमा नेपाली आरोहीले काम गरिरहेका छन् ।
२१ पटक सगरमाथा चढेका आप्पा शेर्पा । अहिले उनी अमेरिकामा बस्छन् ।
तर पनि सबैभन्दा बढी सेवा, सुविधा र सम्मान दिएर राख्ने अमेरिका नै हो । जापान र युरोपमा पनि सुविधा छ । अमेरिकामा नेपाली आरोहीलाई ठूल्ठूला कार्यक्रममा लेक्चर दिन लगाइन्छ । ह्यान्डसम पैसा पे गर्छन । कुनै पनि कम्पनीले एक डेढ घण्टा लेक्चर दिएको २ हजार २५ सय डलर दिन्छन् । महिनामा ५ वटा मात्र लेक्चर दियो भने पनि राम्रो कमाई गर्छन् ।
आङरिता शेर्पा हिमचितुवा भनेर चिनिनुहुन्छ ।अर्थात् हिउँमा चितुवा झैं कुद्ने मान्छे । उहाँले १० पटक बिनाअक्सिजन सगरमाथा चढेर वल्र्ड रेकर्ड राख्नुभयो । कुनै समय धेरै पटक सगरमाथा चढेको रेकर्ड पनि उहाँकै थियो । पछि आप्पा शेर्पाले उहाँको रेकर्ड ब्रेक गर्नुभयो । आप्पाको रेकर्ड कामिरिताले तोड्नुभयो । कति रेकर्ड धारीहरु हिमाल चढ्दा चढ्दै दुर्घटनामा परेर मरेका छन् । १० पटकभन्दा बढी सगरमाथा चढ्ने शेर्पाहरु धेरै हुनुहुन्छ ।
वर्ल्ड रेकर्डधारी आङरिता शेर्पा सरकारबाट उपेक्षित हुनुहुन्छ । उहाँको उपचारमा समेत सरकारले चासो दिएको छैन । १८/२० वर्षअघिको कुरा हो, उहाँको अवस्था दयनिय थियो । रिभर रिभोर सिरेसिस भएर सोलुखुम्बुको खुन्दे हस्पिटलमा उपचार भइरहेको थियो । डाक्टरले यहाँ उपचार हुन सक्दैन, राम्रो ठाउँमा लैजानुस् भनेको रहेछ । मैले थाहा पाउने वित्तिकै हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरीआङरितालाई टिचिङ हस्पिटल ल्याएँ । डेढ महिना टिचिङमा राखेर उपचार गरियो । यदि २ दिन मात्र ढिलो भएको भए उपचार हुन सक्दैन रहेछ ।
दुई वर्षअघिको कुरा, म एनएमएको अध्यक्ष थिएँ । आङरितालाई राती बेथाले च्यापेछ । परिवारले चावहिलको मेडिकेयर हस्पिटल लाग्नुभएछ । मेडिकेयरले ब्रेनमा समस्या भनेपछि तुरुन्तै न्यूरो हस्पिटल लगिएछ । मैले थाहा पाउने वित्तिकै तुरुन्तै गएँ । परिवार चिन्तित थियो । उपचार गर्न ठूलो रकम लाग्थ्यो ।
न्यूरोमा पुगेर भनेँ, आङरितालाई पहिला उपचार गरिहालौं, पैसाका लागि सरकारसँग पहल गरौंला, व्यवसायीसँग मागौंला । उहाँको अप्रेसनमा न्यूनतम ४३ लाख लाग्ने भनिएको थियो । धेरै ठूलो रकम थियो । निको पार्ने काम गरौं, पैसाको मुख नहेरौं । सबैसँग मागेर भएपनि जुटाउँला भनेँ ।
१० पटक बिनाअक्सिजन सगरमाथा चढेर वर्ल्ड रेकर्ड राखेका आङरिता शेर्पा । उनी हिमचितुवा भनेर चिनिन्छन् ।
हाम्रा नेताहरु सामान्य उपचारका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशका सुविधा सम्पन्न हस्पिटल धाउँछन् । तर संसारकै आइकन उपचार नपाएर मर्ने अवस्थामा छ । यो कति दर्दानक अवस्था हो ।सरकारले ५०/६० लाख पनि खर्च गर्न सक्दैन ।
आङरिताको उपचार भयो । मन्त्रीहरु हस्पिटल पुगेरै आश्वासन दिने काम गरे तर आश्वासन पुरा गरेनन् । अहिले उहाँको स्वास्थ्य ठिक छ । जोरपाटी बस्नु हुन्छ । उहाँ जत्तिको मान्छेले राष्ट्रिय सम्मानका साथ जिउनु पर्ने होइन ? राज्यले रेखदेख गर्ने होइन ? उहाँ विदेश नगएकै कारण दुखी जीवन जिउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ?
सरकारी कर्मचारीको रबैया
म पर्यटनमा लागेको ४४ वर्ष भयो । अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्छु । हामी हिमालको विद्यार्थी ठान्छौं । तर सरकारी कर्मचारी पर्यटन सम्वद्ध निकायमा आएको ७/८ महिना पनि भएको हुँदैन, आफुलाई हिमालको विज्ञ नै ठान्छन् । अरुबाट सुझाव लिए आफ्नो मान मर्दन घटेको अनुभव गर्छन् ।
खासमा हिमालमा समन्वय गर्ने सरकारी अधिकारी (लेजो अफिसियर) शेर्पा आरोही नै राख्नुपर्ने हो । रिटायर्ड भएका शेर्पा आरोहीलाई लेजो अफिसर बनाउँदा आर्थिक सहायता पनि हुन्छ । शेर्पाको सम्मान पनि हुन्थ्यो । समन्वय पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो । यो कुरा मान्न सरकार तयार छैन् ।
लेजो अफिसरको काम हिमालमा आरोही र सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने हो । आरोही, एक्सपीडिसन टिम, गाईडलाई केही अप्ठ्यारो परेमा समन्वय गर्ने हो । लेजो अफिसर कम्तीमा एभरेष्ट बेसक्याम्पसम्म पुग्ने शारिरिक क्षमता भएको हुनुपर्छ । बेसक्याम्पमै पनि पुग्न नसक्नेहरु लेजो अफिसर हुन्छन् ।
सरकारले खटाएका लेजो अफिसरप्रति हरेक एक्सपीडिसन टिमले गुनासो पोख्छन् । यो आजदेखिको समस्या होइन, १९६० को दशकदेखिकै हो । जहिले पनि लेजो अफिसरप्रति असन्तुष्टी प्रकट हुन्छ । सरकारले पनि चासो दिँदैन ।
हामी भन्छौं, आरोहीलाई लेजो अफिसर राख्नुपर्छ । उनीहरुलाई लेजो अफिसर बनाइदिए क्याम्प वान, क्याम्प टुतिर दुर्घटना भएमा दौडेर गएर उद्दार गर्न पनि सक्छन् नि । सरकारले पनि शेर्पाको सम्मान गरेको ठहर्छ । आरोही रिटायर्ड भएपछि उसलाई जीवन यापन गर्न पनि सहज हुन्छ । नयाँ पुस्ताले पनि हिमालमा सम्भवना देख्न थाल्छन् । लेजो अफिसर सक्षम आरोही हुनुपर्ने देख्छु ।
तीब्बतमा एउटा लेजो अफिसर र एउटा इन्टरप्रेटर (भाषा अनुवादक) हुन्छन् । दुई जनाले सगरमाथा चढ्ने पुरै टिमको व्यवस्थापन गरेका हुन्छन् । उनीहरु आवश्यक परेमा एडभान्स बेसक्याम्प ६ हजार ४ सय मिटरमा पनि पुग्न सक्छन् । अरु समय बेस क्याम्पमा बसेर समन्वय गर्छन् ।
हाम्रोमा लेजो अफिसर बेसक्याम्प गयो भने पनि समस्या हुन्छ । नगए पनि समस्या निकाल्छन् । लेजो अफिसरले कुक र किचेन व्यायलाई हैरान पार्छन् । दिशा गर्न जान पनि तातो पनि देउ भन्छन् । हिमालमा आइस पगालेर पानी तताउने हो । धेरै समय लाग्छ ।
कहाँबाट तातो पानी दिनु ?ताजा खशीको मासु,कुखुराको मासु चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो भन्छन् । त्यो ठाउँमा कुखुरा र खशीको ताजा मासु खोज्नकहाँ जाने ?
धेरैजसो लेजो अफिसर नाम्चे, तेङबोचेतिर बस्छन् । बेसक्याम्प पुग्न सक्दैनन् । अरु काम हुँदैन तास खेलेर बस्छन् । तेङबोचेमा एक बोटल वियरको ७/८ सय पर्छ । एउटैले स्न्याक्स, खाजा, खाना गरेर तीन/चार हजार खर्च गर्दिन्छन् ।
उनीहरु मोटो रकमको बिल उठाउँछन् । लेजो अफिसर बेसक्याम्पमा बस्छ कि भनेर एक्पिडिसन टिमले उसको खाने, बस्ने सारा व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । एक्सपीडिसन टिमलाई एकातिर बेसक्याम्पमा खर्च हुन्छ, अर्कोतिर तलको बिलले थिचेको हुन्छ ।
लेजो अफिसरको माग पुरा गरिसक्नु हुँदैन । म उपसचिव, सहसचिव, सरकारी अधिकृत भन्दै घुर्काउँछन् । उनीहरुको सम्पूर्ण खर्च एक्सिपीडिसन टिमले बेहोर्नु पर्छ । कहिलेकाहीँ लेजो अफिसर र आरोहण टीमबीच बार्गेनिङमा खटपट पन हुन्छ ।
आरोहणको भविष्य ?
भविष्य संकटमा देखिन्छ । पछिल्लो पुस्ताका शेर्पाहरुले राम्रो स्कुल कलेज पढेका छन् । निकै ट्यालेन्टेड छन् । जागिर, व्यवसाय, आरोहण वा विदेश जाने अप्सन पनि छ ।
पहिला एउटा एक्सपिडिसन टिमलाई २० आरोही चाहिएको छ भने सयौं आरोही गाइडले धेरै अगाडिदेखि नै मलाई राख्देउ भन्दै आउँथे । तर अहिले विदेशी आरोही आउनु ७/८ महिनाअघि नै लाखौं रुपैयाँ एडभान्स दिएर गाईड रिजर्भ गर्नुपर्छ । यदि विदेशबाट आरोही टिम आएन भने एडभान्स रकम गुमाउनु पर्छ ।
सगरमाथाको चुचुरोतर्फ लाग्दै आरोहीहरू ।
पहिला शेर्पा आरोही मलाई काम देउ भन्दै व्यवसायीकोमा धाउँथे, अहिले व्यवसायी नै गाईडको खुट्टा ढोग्न जाने अवस्था छ ।
आरोहणलाई निरन्तरता दिनराज्यले दक्ष जनशक्ती उत्पादन गर्न तालिम दिनुपर्छ । जबसम्म दक्ष जनशक्ती हुँदेनन, आरोहणले निरन्तरता पाउँदैनन् । किनकी पुराना आरोही रिटायर्ड हुँदैछन्, नयाँ पुस्ता आरोहणमा आउने शंकेत देखिदैन ।
विदेशी आरोहीको ज्यान शेर्पा गाईडको हत्केलामा हुन्छ । गाईडको थोरैमात्र गल्तीले आरोहीको ज्यान जान सक्छ । गाईडले हिमाल चढाउने मात्र होइन, इमरजेन्सी पर्दा रेस्क्यू पनि गर्नुपर्छ । तत्काल प्राथमिक उपचार गर्नुपर्छ । यो सब थाहा हुनुपर्छ ।
गाईड रिटायर्ड भएपछि जीवन यापन गर्न सक्ने स्रोतको व्यवस्था गरिनु पर्छ । अंगभंग हुँदा आर्थिक सहायता हुनुपर्छ । रिटायर्ड गाईडलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तिब्बतमा गाईडलाई धेरै सुविधा दिएको छ । घर नै दिएको छ ।
इन्डियामा पनि रासन र बासको सुविधा छ । इज्ययत उत्तिकै छ ।सरकारी जागिर दिएको छ । हरियाणा राज्यमा सगरमाथा चढ्ने वित्तिकै पुलिसको डिएसपी भइने रहेछ । अनि १५/१६ लाख आइसी पनि दिने रहेछ । इन्डियन पुलिसको ठूलो टिम आउने कारण पनि त्यही रहेछ ।
इन्डियामा तीन तहको सरकारबीच आरोहलाई सेवा सुविधा दिन तछाड मछाड हुन्छ । इन्डियामा नेपाली आरोहीलाई पनि ठूलो सम्मान दिइन्छ । इन्डियाले कतिपय हिमाल चढ्न नेपाली गाईडलाई बोलाउँछन् । नेपाली गाईडले लिडर बनेर काम गरेका छन् । सरकारी सेवा सुविधा पाएका छन् ।
विश्वमै सबैभन्दा बेस्ड क्लाइम्बर भनेको शेर्पा नै हुन् । जुनसुकै मुलुकमा पनि शेर्पाको डिमाण्ड छ । नेपालले मात्र शेर्पाको योगदान चिन्न नसकेको हो ।
युरोपका विभिन्न मुलुकमा वातावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कन्फ्रेन्सहरु भइरहन्छन् । त्यहाँ जहिल्यै मलाई बोलाउँछन् । एक त शेर्पा भन्ने वित्तिकै धेरैलाई क्युरिसिटी हुँदो रहेछ । शेर्पा भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, हिमालमा बाँदरजस्तै चढ्ने होला भन्ने सोँच्ने रहेछन् ।
हामीलाई बिजनेश क्लास टिकट काटेर पठाउँछन्। पाँचतारे डिलक्स होटलमा कोठा दिन्छन् । कन्फ्रेन्स आयोजकले नेपालबाट प्रख्यात आरोही आउँदैछ भनेपछि हलमा अटाई नअटाई मान्छे आउँछन् रे । हामीलाई बिजनेश क्लास टिकट र तारे होटलमा राखेर उनीहरुलाई खर्च हुँदैन, धेरै गुना फाइदा हुन्छ रे ।
विदेशमा प्रख्यात नेपाली आरोहीले लेक्चर दिएरै समृद्ध जीवन यापन गरिरहेका छन् ।
उनीहरु राम्रो कमाउँछन् र खर्च पनि गर्छन् । अरोहणमा जानुअघि जीवन रक्षा गर्न पुजा पाठ गर्छन् । धेरै खर्च पुजा पाठमै हुन्छ । भोज भतेरमा धेरै खर्च गर्छन् । भोली मारिन्छ वा बाँचिन्छ यकिन हुँदैन भन्ने शेर्पामा छ । आरोहण गरेर फर्केपछि दुःख गरेर कमाएको बिर्सन्छ, अनि बाँचेर फर्किएँ भन्दै खर्च गर्छन् । उनीहरुको कमाई बचत हुँदैन ।
कतिपय आरोहीहरु धेरै सचेत पनि हुनुहुन्छ । भविष्य हेर्नुहुन्छ । उहाँहरुको राम्रो प्रबन्ध पनि छ ।
८ श्रावण २०७६, बुधबार १३:५४ मा प्रकाशित
Related Topics:everesthimalayanepalsherpaकामिरिता शेर्पानेपालपर्यटन्रशेर्पा गाइडसगरमाथा
१० वर्षअघि म्याद सकिएका ‘टियर ग्याँस’ अझै प्रयोगमा : जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड
क्वारेन्टाइन बनाउन पैसा छैन, ‘भ्यू टावर’ मा अढाइ अर्ब
नेपालीको मुटु पोलिरहने काेशी, गण्डकी र महाकाली सन्धी
६ लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलिन महासंघको सुझाव [पूर्णपाठ]
विनोद चौधरीको समितिले बुझायो प्रतिवेदन : विपन्न परिवारलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिन प्रस्ताव